योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदा भएको चार्टर फ्लाइटको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन, भट्टराई फन्दामा ! — newsparda.com
योगेश भट्टराई मन्त्री हुँदा भएको चार्टर फ्लाइटको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन, भट्टराई फन्दामा !
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोरोना महामारीको समयमा खाडी मुलुकमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको हबाइ उद्धार गर्न गरिएको चार्टर फ्लाइटमा भएको अनिमियताका विषयमा एक छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुईंटेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।
तत्कालिन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको कार्यकालमा खाडी मुलुकका कामदारको उद्धारका लागि चाटर्ड फ्लाईट गरिएको थियो । ति फ्लाइटहरुमा मिलेमतो गरि करोडौं अनियमितता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । अध्ययन समितिले कैफियत फेला पारेमा तत्कालिन मन्त्री योगेश भट्टराई समेत मुछिने सम्भावना छ । https://sudarshankhabar.com/ बाट साभार गरीएकाे हाे ।
सबै प्रक्रिया पुगेको रहेछ भने आयोगको निर्णयबाट दल दर्ता हुने जनाइएको छ । राईले आफु अध्यक्ष रहेको २५ सदस्यीय कार्यसमिति सदस्य रहेको पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको बताए ।
यस्तै नेकपा लोकतान्त्रिक पनि दर्ताको तयारीमा छ । सुदीप रुवाली अध्यक्ष र सृष्टी बराल महासचिव रहेको उक्त पार्टी निषेधाज्ञाकै बीच दर्ताका लागि गए पनि आयोगले विधान नमिलेको भन्दै फिर्ता पठाएको थियो । दल दर्ताका लागि निवेदन आएको तर त्यो प्रक्रियामै रहेको आयोगले जनाएको छ ।